Waxaa free download, or read Waxaa online
Waqtiga Baaritaanka • San qabte ayaa lagaaga dhejin doonaa sanka si markaas aad afka uga neefsatid. • Waxaad neef ku jiidanaysaa oo aad haddana ka soo saaraysaa tuubo ku xiran makiinad. • Waxaa laga yaabaa in lagaa codsado inaad: Neef u jiiddid sida ugu qotada dheer ee aad awooddid ka dibna aad hawo ...
lagaa, codsado, yaabaa, makiinad, xiran
ALLAHU AKBAR Kala Soco Halkaan Bishaaradka Xamlada Nihaayatul ...
Waxaa*qoray* Mushrif17 * Waxaa*qoray* Umm'*Mujaheid * Waxaa*qoray* bint*hamid * Waxaa*qoray* alqimmah*reporter * * *./01*نأ*4/567*89:;*نأ*<:;*49=>?
qoray, reporter, alqimmah, mujaheid, mushrif17
Waxaa leyga dooni karaa in aan bixiyo dhammaan ama qeyb ka mid ah qiimaha baaritaanka haddii Maxkamada igu hesho in aan ahay aabaha. Natiijadaha baaritaan kasta lagu gaaraayo u badnaashadeyda aabanimo waxaa loo isticmaali karaa caddeyn ahaan inta la qaadaayo dacwadda.
karaa, aabanimo, badnaashadeyda, gaaraayo, isticmaali
Waxaa meesha joogay maamulihii iskuulka, Winnifred Todd, macalimad Sharon Nakanishi-Acena iyo macalimada masawirka barta, Taryn Piller, waxaa sidoo kale halkaas joogay eheladii Xaliimo.
joogay, piller, taryn, barta, sidoo
Waxaa tani ugu wacan in ay jiraan dhowr siyaalood oo hal wax loo sheegi karo, ama in ay jiri karaan in ka badan hal jawaab. Waxaa lagaa doonayaa oo kaliya in aad hal jawaab ka xulato liiska, aan ka ahayn marka su'aasha ay doonayso in ka badan hal jawaab .
jawaab, badan, xulato, liiska, ahayn
Baaritaanka cadaadiska nafsadeed waxaa sidoo kale loo yaqaannaa baaritaan jir-dhis, wadne, ama cadaadis wadne. Baaritaankan waxaa lagu hubinayaa sida wadnahaagu uu u shaqeeyo marka uu jiro cadaadis
cadaadis, wadne, hubinayaa, wadnahaagu, shaqeeyo
Waxaa jira hab AMMAAN AH, MUNAASAB AH, oo FUDUD oo aad bil walba ku heli karaysid faa’iidooyinkaaga. Waxaa loo yaqaannaa Kaarka Vision Kansas.
yaqaannaa, kaarka, vision, kansas, iidooyinkaaga
GogolDhig Weedhaha mgmISlda ah ee buuggam waxay u habaysanylhl1n falalloo xushay qummanaantooda, koobnaantooda Iyo ku habboonaantooda baahlda dadka ku cusub dalkan marykanka Sldooda badanna waxaa 100 qoray Sl kooban 00 ku eg sheeko laba sadar ah Weedhaha Iyo ereyada ay ka koobanYlhl1n 19 ka ...
weedhaha, badanna, sldooda, dalkan, qoray
macluumaadka ugu badan waxaa laga soo ururuyay Waqooyi Galbeed iyo Koofurta, aagga Waqooyi Bari waxaa xogta waxay kooban tahay oo kaliya arrimaha la xiriira huuga (dahaarka) dhulka iyo dhirta yaryar kulligeed.
waqooyi, huuga, xiriira, arrimaha, dahaarka
Biyaha cad waxaa ka mid ah biyo, jalaatada barafka ah, biyaha tufaaxa, Jell-O ® , Kool-aid ®, ama cabid khafiifka ah. Ha siin caano, nacnac adag, xanjo, ama cabitaan aan ka ahayn biyo tufaax.
biyaha, xanjo, cabitaan, ahayn, tufaax